Ipentshisi Eliphuziwe Elithosiwe kuTin
Izithelo Ezikheniwe ku-Tin
Imifino nezithelo ze-VF
Amabhisikidi ayindilinga emifino
Amabhotela Amantongomane 210g
Okukheniwe isi-mandarin orange ku-Glass Jar
Ipentshisi Eliphuziwe Elikheniwe ku-Glass Jar
Izinti Zebhontshisi Emnyama Ezomile
AmaSpredishithi Omile Obhontshisi Omisiwe
Amafutha eSesame, uwoyela wemifino onambithekayo wendabuko eChina. Ikhishwe embewini yesesame futhi ine-flavour enamandla yesesame yokuthosa. Uwoyela weSesame unokunambitheka okumsulwa kanye ne-aftertaste ende. Kuyisinongo esibalulekile empilweni yansuku zonke. Ngaphandle kokusetshenziswa njengoyili wokupheka, isetshenziswa njengesithambisi sokunambitheka ezindaweni eziningi zokupheka, inephunga elimnandi le-nutty nokunambitheka. Noma ngabe yisitsha esibandayo, isitsha esishisayo noma isobho, kungabizwa ngokushiswa kwelanga
I-Pure Sesame Oil 160ml
Uwoyela weSesame uyisithako esinamandla esabuyela emuva ezinkulungwaneni zeminyaka futhi saziwa ngekhono laso lokukhulisa ukunambitheka nezinzuzo zezempilo nganoma yisiphi isidlo. Ngaphezu kokunikela ngengcebo yama-antioxidants namafutha anempilo yenhliziyo, lesi sithako esinomsoco sikhonjisiwe ukuthi sisekela impilo yesikhumba, sithuthukisa impilo yenhliziyo, sinciphise ukuvuvukala futhi sidambise nobuhlungu obungapheli. Ibuye ibe novithamini ocebile nezinto zokulandela umkhondo ezibalulekile ezifana ne-iron, i-zinc nethusi, futhi okuqukethwe yi-cholesterol yayo kuphansi kakhulu kunamafutha ezilwane. Uwoyela we-sesame unenani elithile lokwelapha, elingabambezela ukuguga, livikele imithambo yegazi, limanzise amathumbu futhi likhulule, linciphise ubuthi kagwayi notshwala, livikele nesibindi.
Incazelo: Amabhodlela ayi-160ml * ayi-12 / ama-CTN
Impilo eshalofini: Izinyanga eziyi-18
Isitoreji: Indawo epholile neyomile, gwema ilanga eliqondile.
Izitifiketi: HACCP, ISO9001: 2008
1. Isosi yesoseya enempilo futhi emsulwa, Akukho okufakiwe
2. Uwoyela weSesame uqukethe ama-fatty acids angadingekile nama-amino acid, okuma kuqala kuzo zonke izinhlobo zamafutha yemifino.
Ithiphu efudumele: Kuyimvelo ukuthi umkhiqizo ujiye lapho ubanda noma ugoqana esihlabathini kancane kancane ukusuka phansi kuye phezulu.
Imifino ebandayo / isaladi
3.Govuza imifino ethosiwe
Inqubomgomo yamasampula: Amasampula wamahhala ayatholakala, amakhasimende ngokuvamile kufanele akhokhele ukuthuthwa kwempahla.
Indlela yokukhokha: T / T, L / C lapho ubona, ezinye izindlela sicela uxhumane nathi kuqala.
Isikhathi sokuhola: Ngokuvamile izinsuku eziyi-15- 25 ngemuva kokuqinisekiswa kwe-oda, ama-oda e-OEM azoba mide kancane.
Langaphambilini Rose Uviniga
Olandelayo: Amabhisikidi asekuseni
I-Asia Sesame Amafutha
Chinese Amafutha Sesame
Amafutha eSesame acindezelwe Cold
Amafutha eSesame ahlanzekile
I-Refined Sesame Seed Oil
Amafutha eSesame Ngobuningi
Amafutha weSesamum Indicum
Isigaxa Sobhontshisi Esithambile Esinezinongo
I-Classic Spicy Bean Curd Slice
I-Mixed Sesame Tahini
I-Hawthorn Strip, Izingane Amabhisikidi, Induku entsha ye-Bean Curd, Ukudla Amakinati Anosawoti, Ikhukhi leLadyfinger, Amaphakethe Esoso Soy,